egbugbu - Buru Your Dream Design - News Ọchịchị
egbugbu – Buru Your Dream Design
Egbugbu dị nnọọ nkịtị ụbọchị ndị a, na fọrọ nke nta 1 na 4 ndị mmadụ na-enwe dịkarịa ala otu. Egbugbu na-anọchi anya nkà n'ụdị, na-ekwe ka ndị na-akpọsa bụ ndị ha bụ. N'agbanyeghị na ha na-ewu ewu, ọtụtụ ndị ga-ejedebe regretting ha.
Ọtụtụ ikpe, ndị na-akwa ụta tattoos na-eche banyere ha imewe ma ọ bụ ewepụta oge na-ahọrọ ndị kasị mma igbu ha.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ike ina egbugbu wepụrụ, usoro bụ ọnụ na ezi na-egbu mgbu.
Iji gbochie nke ahụ ime, i kwesịrị ịdị na-ewe oge ụfọdụ na-ahụ zuru okè igbu n gị nrọ imewe.
Kama ịnwa ịzọpụta ego ụfọdụ, ị ga-mgbe na-ahọrọ a studio ma ọ bụ artist dabere na otú ọnụ ala ha bụ.
Ọnụ ala karịa artists na nka ejikari akọ na-arụ ọrụ mma, nke mere ha na-enwe ike na-ana ego ole dị ala.
Kama, i kwesịrị ịchọ ndị kasị mma studio na omenkà na i nwere ike ịhụ gị nso ebe. Ọ bụ ezie na o nwere ike ịbụ oké ọnụ n ogo na imewe ga-abara ya.
English: Freehand udara okooko ya koi azụ. Kere na igbu site Life ụfụ (Photo Ebe E Si Nweta: Wikipedia)
n'ihi na ụfọdụ, ha nrọ imewe bụ onye. Nke a pụrụ ịbụ onye a hụrụ n'anya ma ọ bụ onye nāgabiga.
Ị nwere ike iji a haziri ma ọ bụ akara nke ahụ pụtara ihe na ị na-echetara gị n'ime ha ma ọ bụ ị nwere ike iji ha ihu. Mma igbu artists nwere ike ime ka kpokọtara tattoos na pụtara, ma ọ bụ onye ihu ma ọ bụ ihe nnọchianya na-ewetara pụtara.
Mgbe ụfọdụ,, ọ na-ike ike ịchọpụta gị nrọ imewe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe echiche n'uche ma ka na-adịghị n'aka na ihe ị chọrọ, ị nwere ike mgbe niile research.
Ị nwere ike nweta igbu akwụkwọ, isiokwu akwụkwọ, magazin, ma ọ bụ nanị nnyocha online. Site na-achọ na aghụghọ i nwere ike ịhụ ihe yiri ihe i nwere mmasị na.
Ozugbo ị chọtara ya, niile ị chọrọ ime bụ na-anọdụ ala gị igbu artists na-abịa na gị nrọ igbu imewe.
Ọ bụrụ na ị nwere echiche bụ isi maka ihe nta n'uche, ị nwere ike mgbe niile nwere ya egbugbu mgbe ahụ abịa azụ mgbe e mesịrị na ọzọ kwukwara on.
Ihe kacha mma banyere tattoos bụ eziokwu na ha nwere ike mgbe niile-atụkwasịkwara mgbe e mesịrị. Nke a pụrụ ịbụ oké ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ iyi a nta igbu mbụ, ma kpebizie ma ma ọ bụ na ị chọrọ inwe ya ibu.
Ọ bụrụ na ị na-amalite na a nta nke gị nrọ imewe, ị nwere ike mgbe niile rụchaa ya ma emecha on.
Mgbe ọ bụla ị ga-esi gị nrọ igbu i kwesịrị ịdị na-ewepụta oge na-ahọpụta imewe.
Egbugbu ga-anọ na ị ruo mgbe ebighị ebi, nke bụ ihe mere ị ga-ekporo ha nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-etinye ndị dị mkpa oge ma chere na n'ime ya ugbu a, ị wonít nra. Gị nrọ imewe kwesịrị nnọọ mkpa, ma jide nke pụtara.
Ụzọ a, oge ọ bụla ị na-ele ya n youíll-echetara na oge pụrụ iche na oge na youíll echefu banyere ya.
David Beckhams Nkecha igbu Designs
Rihanna Tweets About Raunchy Sex Gosi na Thailand
Katy Perry wakporo site Oscar Nominated filmmaker
20 kasị mma Android ngwa ọdịnala na egwuregwu a izu
18692	0 art, Bodyart, Cheryl Cole, Nikko Hurtado, Studios, egbugbu, igbu omenka, United States
← Ịzụ A Mountain Bike Guide Agha Ọzọ na Inwe Ọganihu →